'Usafamba': Dhipatimendi reUS State rinokwidza Venezuela kufamba yambiro kusvika paNhanho 4
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » 'Usafamba': Dhipatimendi reUS State rinokwidza Venezuela kufamba yambiro kusvika paNhanho 4
Airlines • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Venezuela Kupwanya Nhau
Dhipatimendi reUnited States rakasimudza yambiro yaro yekuVenezuela yezvekufamba kune vagari vemuUS kuti "vasafambe," zvichiratidza kusagadzikana kwevanhu.
Dhipatimendi rakaburitsa yambiro yeteyiti 4 pamusi weChipiri masikati, ichinyevera vanhu vekuAmerica kuti vadzivise nyika nekuda kwe "mhosva, kusagadzikana kwevanhu, hupfumi husina kunaka," uye "kusunga nekusungwa zvisina tsarukano" kwevagari vemuUS.
Iro zano nyowani rekufamba rinoyambira vagari vemuUS nezve "kusagadzikana kwezvematongerwo enyika" uye mukana wekuti vabatwe nemaratidziro ane chisimba emumigwagwa ayo anogona kuitika "pasina chiziviso."
Yambiro "zvine simba" inokurudzira kuti vagari vemuUS vakazvimirira vasiye Venezuela, vachiisa Venezuela muchikamu chimwe chete seSyria neNorth Korea. Izvo zvinouya mazuva mushure mekunge US yaraira kubviswa kwevashandi vasiri vechimbichimbi kubva kumumiriri wayo muCaracas, izvo zvasiya ne "kugona kushoma" kwekupa rubatsiro rwechimbichimbi kuvagari vekuUS ikoko.
United States yakawedzera kumanikidza kuVenezuela svondo rapfuura, ichiziva mutungamiri anopikisa semutungamiriri wenyika uye achikumbira Maduro kuti abve pachigaro. Washington yakatemera zvirango kukambani yemafuta yeVenezuela PDVSA nemusi weMuvhuro, zvichipa mhosva kubva kugurukota rezvekunze kwenyika kuti US yaida kuita coup.